Daadad ku dhuftay Shiinaha: Khasaaraha iyo Xeeladda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 13/01/2022 10:00 | Daadadka
Isbeddelka cimiladu awgeed, dhacdooyinka cimilo ee ba'an sida daadadka ayaa ku dhacaya soo noqnoqoshada iyo xoojinta. The daadadka Shiinaha si aad ah ayey u kordhayaan. Waxay horeba u geysteen khasaare dhaqaale oo tiro badan waxayna sababeen dhimasho badan sannadihii u dambeeyay. Si taas loo sameeyo, Shiinuhu waxay dejiyeen xeelado ay ku awoodaan inay joojiyaan daadadkan dilaaga ah.
Sidaa darteed, waxaanu maqaalkan u hurayn doonaa inaanu kuu sheegno wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato daadadka Shiinaha, khasaaraha ay geystaan ​​iyo waxa ay tahay tallaabooyinka iyo xeeladaha ay dawladdu qaaday.
1 Daadad ka dhacay Shiinaha
2 Xeeladaha looga hortagayo fatahaadaha Shiinaha
3 Qodobbo muhiim ah
Horumarka la yaabka leh ee Shiinaha ee magaalaynta tobanaankii sano ee la soo dhaafay, oo ay weheliso muuqaalkiisa juqraafiyeed iyo cimilo ee u gaarka ah, ayaa abuuray isku darka dilaaga ah ee daadadkii magaalooyinka ee sababay malaayiin dhibanayaal ah. boqolaal kun oo dhimasho ah iyo khasaare dhaqaale oo aad u weyn. Tallaabooyin dhowr ah ayaa la qaaday si wax looga qabto fatahaadaha. Maxay yihiin iyo maxay yihiin natiijooyinkooda? qoraalka xiga.
Laga soo bilaabo 1949, in ka badan 50 daadad oo waaweyn oo ay sababeen duufaanno, duufaanno ama mowjado ayaa saameeyay meelo kala duwan oo dhulka Shiinaha ah.. Dhacdooyinkaasi waxay u horseedeen dawladda inay samayso qorshayaal ka-hortag ah si loo yareeyo khasaaraha bini’aadamka iyo kuwa maadiga ah, iyada oo dib-u-heshiisiinta geeddi-socodka xidhiidhka ka dhexeeya fatahaadaha iyo horumarka dhaqan-dhaqaale.
Taariikhdu waa deeqsinimo marka ay timaado aafooyinka daadka la xiriira. Tusaale ahaan, 1931kii, Wuhan waxa daadad ku dhacay in ka badan 100 maalmood daadad ka dhigay in ka badan 780 oo qof guri la'aan iyo diley 000. Daadad kale oo masiibo ah ayaa ka dhacday webiga Han 32, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 600 qof ayna qariyeen magaalada Ankang 1983 mitir ayaa ka hooseysa heerka badda.
Ilaa 2000, Shiinuhu waxa soo maray daadad waaweyn ugu yaraan hal mar labadii sanaba. Qaar ka mid ah kiisaska ugu caansan waxaa ka mid ah daadadka Luulyo 2003, markii duufaan aan hore loo arag ay ku dhufatay Nanjing, taasoo sababtay roobab maalinle ah oo ka badan 309 mm - ku dhawaad ​​​​laba jibaar roobabkii sannadlaha ah ee bartamaha Chile - oo ay ku dhinteen boqolaal qof, oo lagu daray in ka badan 1 milyan oo dhibanayaal ah.
Bishii Luulyo 2007, Chongqing iyo Jinan waxaa ku dhuftey mid ka mid ah duufaanadii ugu waaweynaa muddo 100 sano ah. dilay 103 qof, 2010-kii, Sichuan waxa ay guri la’aan ku noqotay in ka badan 800.000 oo qof, waxaana ku dhintay 150 qof. Xogtu waxay muujineysaa in ku dhawaad ​​80% fatahaaduhu aysan ka dhicin dhulka miyiga ah, balse ay ka dhacaan magaalooyinka.
Waqtigan, khubarada ku taqasusay magaalooyinka ayaa si fiican u ogsoon in magaalooyinka casriga ahi aanay ku filnayn inay u adkaystaan ​​roobabka waaweyn, waxaanay sheegeen in masiibo “dhexdhexaad ah” ay u badan tahay inay dib u dhigto horumarka magaalada muddo labaatan sano ah.
Xeeladaha looga hortagayo fatahaadaha Shiinaha
Guud ahaan daadadka ka soo rogmaday magaalooyinka ayaa khasaare badan geysta, dad badana saameeya, khasaaraha iyo khasaaruhuna waxa uu la mid yahay kobaca magaalada, markaa khatartu sannad kasta way sii korodhaa marka ay magaaladu sii socoto, taas oo ka sii welwel badan haddii la iska dulqaadan karo. Khatar gelinta guud ahaan xasilloonida dhaqan-dhaqaale ee gobollada ay ku nool yihiin tobanaan ama boqollaal milyan oo qof.
Si loo soo afjaro sheekadan murugada leh, 2003dii Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Shiinaha waxay u soo jeedisay dowladda dhexe inay tallaabo ka qaado arrintan, taasoo keentay in laga beddelo siyaasadda xakamaynta fatahaadaha oo aan waxtar lahayn oo loo beddelo siyaasadda xakamaynta fatahaadaha.
Tani waxay keentay in la habeeyo hawlaha wax soo saarka ee aagga daadadka, horumarinta qorshayaasha ka hortagga iyo tallaabooyin taxane ah oo lagu dammaanad qaadayo badbaadada dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu qiyaasaa in 355 ka mid ah 642-da magaalo ee xakameynta fatahaaduhu ay tahay shaqada ugu weyn -55% - ay isticmaalaan heerar ka hooseeya kuwii ay dejisay dowladda dhexe.
Sanadihii la soo dhaafay, Shiinuhu wuxuu soo bandhigay fikradda "maareynta khatarta" wuxuuna soo jeediyay siyaasado cusub. Haddaba, si looga gudbo ku-tiirsanaanta qaab-dhismeedkeeda si loo dhimo waxyeellada fatahaadda, loona gudbo isu-dheellitirka qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedkeeda, Wasaaradda Khayraadka Biyuhu waxay samaysay Istaraatiijiyad Qaran oo Maareynta Fatahaadaha 2005-tii.
Waxa loogu yeero "Istaraatiijiyada Xakamaynta Daadka Shiinaha" waxaa lagu sifeyn karaa si fudud: Dowladda Shiinaha ayaa go'aansata xakamaynta daadadka iyadoo ku saleysan khatarta, xoojinta tallaabooyinka aan qaab-dhismeed ahayn, gaar ahaan maamulka, dhaqaalaha, tignoolajiyada iyo waxbarashada (sida nidaamyada go'aan qaadashada dhexe, ka hortagga. nidaamyada, qorshayaasha yaraynta masiibada iyo caymiska xakamaynta daadadka) iyo fududaynta fulinta qorshayaasha lagu hirgalinayo talaabooyinka qaabdhismeedka, sida Xoojinta Biyo-xireennada, Nidaaminta Heerarka Wabiga iyo Dhismaha Kaydka Biyaha, si loo gaaro faa'iidooyin buuxa iyo kuwa dheer.
Saddexda hawlood ee istiraatijiyadeed ee 'maamulka' daadku waa:
Dhisidda mashaariicda ilaalinta biyaha si loo yareeyo musiibooyinka si wax ku ool ah. Mashruuca biyo xidheenka weyn ee Saddex Gorges ayaa ka muuqda mashruucan.
Xakamee dhaq-dhaqaaqyada bini'aadmiga si loo yareeyo waxyeelada fatahaadda ee qaybta wax soo saarka.
Isticmaalka wanaagsan ee biyaha daadadka iyo isticmaalka kheyraadka biyaha ee haray.
Si loo hirgeliyo qorshahan, dawladda Shiinuhu waxay aqoonsatay xudunta u ah taageerada horumarka sayniska iyo tignoolajiyada, hubinta maalgelin ku filan iyo isdhexgalka bulshada dhimista musiibada. Ugu dambeyntii, adeegsiga daadadka magaalooyinka ee lama huraanka ah si wax looga qabto biyo-la'aanta ay sababto magaalooyinka degdega ah ayaa tusaale wanaagsan u ah istiraatijiyadda Shiinaha ee ma aha oo kaliya raadinta in ay yareyso fatahaadaha iyo saameyntooda xun, laakiin sidoo kale waxay raadineysaa inay ka faa'iideysato masiibooyinka dabiiciga ah ee dhabta ah.
Senator Alejandro Navarro ayaa sheegay in Chile ay ku qasban tahay inay raacdo tusaalaha Shiinaha, "wuxuu fahmay in ay tahay in la saadaaliyo xoogagga dabiiciga ah iyada oo loo marayo istaraatiijiyad dhammaystiran, marka lagu daro dhismaha biyo-xireennada iyo shaqooyinka kale, waxay fiiro gaar ah u leedahay waxbarashada dadweynaha iyo fulinta qorshayaasha yaraynta iyo kuwa kale. cabbiro. »
Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaa ku daray: “Halkan wax daad ah lagama filayo, waxaana jira cadeymo dhowr ah oo muujinaya arrintan. sida wixii ka dhacay kanaalka Papen dhowr bilood ka hor, halkaas oo aan waxba laga qaban si loo xakameeyo biyaha. Roobabkan, ayaa sababay in kanaalka uu fatahay, isla markaana ay dilaan. Boqollaal qof, marka hore Dawladdu waa inay magdhow u fidisaa qoysaska, ka dibna ay dejiso xeelad si aanay mar kale u dhicin xumaanta noocan ah,” ayuu hadalkiisa ku soo xidhay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto daadadka Shiinaha oo aad qadarin karto samayntooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Daadad ka dhacay Shiinaha